Palliative Care (ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Palliative Care (ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Palliative Care (ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း)
Palliative Care (ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဆိုတာဟာ ဘယ်လိုရောဂါမျိုးပဲ ဖြစ်နေဖြစ်နေ ခံစားရသည်များ သက်သာအောင် ဗဟိုပြုကုသတဲ့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုပါပဲ။
ယင်းပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းတွင် ရောဂါဝေဒနာသက်သာစေရန်နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်းရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်စည်းပေးရန်များပါဝင်ပါတယ်။ အတိုချုံးပြောရမယ်ဆိုရင် အထက်ပါနည်းလမ်းက သင့်ဘ၀ အရည်အသွေးကို မြင့်တင်ပေးမှာပါ။
ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကို ဆရာဝန်၊ သူနာပြုနှင့် ကျွမ်းကျင်သူတို့က သင်၊သင့်မိသားစုတို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြမှာပါ။
ရောဂါလက္ခဏာတွေကို သက်သာစေမှာလား၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးမှာလား၊ စိတ်သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမှာလား၊ ဘဝအရည်အသွေးကို တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးမှာလားဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ သင်နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြရမှာပါ။ ကုသမှုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရွေးချယ်စရာတွေကိုလည်း နားလည်သိရှိစေမှာပါ။
Palliative Care (ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အသုံးများသလဲ
အသက်အန္တရယ်ရှိရောဂါ ခံစားနေရသည့် လူနာနှင့် အသည်းအသန် ဖြစ်နေသော လူနာတို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Palliative Care (ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက် အများဆုံးဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်စက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပြဿနာများရှိခြင်း
အထက်တွင် မဖော်ပြထားသော လက္ခဏာများလည်း ရှိပါသေးတယ်။ လက္ခဏာတွေ ခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ဖြင့် ပြသပေးပါ။
နာတာရှည် စိုးရိမ်ရတဲ့ရောဂါတွေ့နဲ့ အသက်အန္တရယ်ရှိတဲ့ ရောဂါတွေကို အထက်ပါ လက္ခဏာတွေနဲ့ အတူ စစ်ဆေးတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ပြသပေးပါ။ လူတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်ဟာ ခန္ဓါကိုယ်ချင်း မတူကြပါဘူး။ ဘယ်အရာက အကောင်းဆုံးမယ်ဖြစ်ဆိုတာ သိရှိဖို့ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းဟာ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
Palliative Care (ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ယင်းပြုစု စောင့်ရှောက်ခြင်းက အောက်ပါရောဂါတွေခံစားနေရတဲ့ ကလေးကော လူကြီးပါ ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
မူလရင်းမြစ်ဆဲလ် (Stem Cells) အစားထိုးကုသမှု လိုအပ်သော သွေးနှင်ရိုးတွင်းခြင်ဆီ မူမမှန်ခြင်းများ
အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပိုးဝင်သည့် ရောဂါ
ပါကင်ဆန် ရောဂါ ( Parkinson’s disease)
Palliative Care (ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အချက်တွေကတော့ အမြောက်အမြားရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ယင်းပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကို အသက်အန္တရယ်ရှိ ရောဂါနဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့် ရောဂါတွေခံစားနေရတဲ့ လူနာတွေမှာ အသုံးပြုပါတယ်။
Palliative Care (ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း) လိုအပ်ကြောင်း ဘယ်လိုသိရှိမှာလဲ။
ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ လက်ရှိကုသနည်းတွေနှင့် ရောဂါက လူနာနဲ့ လူနာမိသားစုပေါ်မှာ ဘယ်လို သက်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့က ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူနာနှင့် ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တို့က ဝေဒနာ သက်သာစေဖို့၊ သက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေဖို့နဲ့ ဘဝမှာ အဆင်ပြေသွားစေဖို့ အစီအစဉ်တွေ ပြုလုပ်ရမှာပါ။ လက်ရှိခံယူထားသော ကုသနည်းတွေနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ချမှတ်ဖို့ အဓိကကုသနေသည့်သူတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမှာပါ။
Palliative Care (ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မှာလဲ။
ဆေးဝါးအသုံးမပြုသော ကုသနည်းတွေကတော့ နှိပ်နယ်ပေးခြင်၊ အကျောလျော့ပေးခြင်း၊ အပ်စိုက်ကုသခြင်း၊ ကိုယ်ကာယ ကုံထုံး၊ အိမ်မွေးတရိစ္ဆာန် ကုထုံး၊ ဂျယ်ကုထုံးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့အခြေအနေများတွင် ဆေးဝါးဖြင့် ကုသခြင်းကို အကြံပြုထားပါတယ်။
တစ်ကိုယ်လုံးရှိ နာကျင်ခြင်းများကို ခန္ဓါကိုယ် စနစ်မှ သက်ရောက်သော၊ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးများ ပိုမို သက်ရောက်နိုင်အောင် ကူညီပေးသော၊ ရောင်ရမ်းခြင်းကို တိုက်ခိုက်ပေးခြင်းဖြင့် ဆေးဝါးကုသခြင်းကို ကူညီပေးသော ဘိန်းကဲ့သို့ ဒြပ်ပေါင်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းဒြပ်ပေါင်းများကို ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်သာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပါ။ ဘိန်းပါဝင်သော အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးများလို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဘိန်းဒြပ်ပေါင်းတွေဟာ နာကျင်ခြင်းသက်သာစေဖို့ တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ အဖြစ်များတာတွေကတော့ အောက်ပါတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘိန်းဒြပ်ပေါင်းတွေ အပြင် အနာသက်သာစေဖို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေ သုံးတဲ့ အခြားဆေးတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ထိုဆေးများကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
စတီးရွိုက်မဟုတ်သော အရောင်ကျဆေးများ (NSAIDS)
Tricyclic antidepressant medications ( စိတ်ကျရောဂါ ဆေးဝါးများ)
ဆီရိုတိုနင်နှင့် နော်အက်ပီနဖရင် ပြန်လည်း သိမ်းဆည်းခြင်းကို တားဆီးပေးသော စိတ်ကျရောဂါ ဆေးဝါးများ (SNRIs)
ယင်းဆေးဝါးများသည် အရိုး၊ အကြော နာကျင်ကိုက်ခဲနေသော သူများအတွက် အထူးသုံးဝင်ပါတယ်။
ရောဂါ ကုသနေတဲ့ တစ်ချိန်တည်းမှာလည်း ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကို ခံယူနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကုသမှုကို စွန့်လွှတ်ဖို့ မလိုသလို ပျောက်ကင်းခြင်းကိုလည်း မျှော်လင့်နေနိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုဘဝပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းမျုား
ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက် လူနေမှုဘဝပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက ဘာတွေလဲ။
အောက်ပါ လူနေမှုဘဝပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်ဆေးနည်းတွေက ဝေဒနာသက်သာ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် နေထိုင်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
စိတ်ဖိစီးမှု၊ ပူပင်သောကများအား ထိန်းချုပ်ထားပါ
ဆေးရွက်ကြီးမသုံးပါနှင့်၊ ဆေးလိပ် မသောက်ပါနှင့်
ကိုယ့်ခံစားချက်တွေ၊ အခက်အခဲတွေကို မိသားစုနှင့် ဆရာဝန်အား ပြောပြပါ။
မေးစရာများ ရှိသေးပါက ပိုမိုနားလည်ပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Palliative care. http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/palliative-care/details/what-you-can-expect/rec-20200504 . Accessed September 26, 2016.
Managing pain beyond drugs. http://www.webmd.com/palliative-care/managing-pain-beyond-drugs. Accessed September 26, 2016.
Pain medications for palliative care. http://www.webmd.com/palliative-care/pain-medications-medications-for-palliative-care?page=2 Accessed September 26, 2016